Guy Rivo Randrianarisoa Efa vonona ny fanarenana an’Antsirabe
Tafapetraka teo anivon’ny OVEC Antsirabe voalohany ny antontan-taratasy maha kandidan’ny antoko Tiako i Madagasikara an’Atoa Guy Rivo Randrianarisoa.
Randrianasolo Jean Nicolas « Hanana kandida manokana ny GJMP »
Antoko manana solombavambahoaka voafidy eny amin’ny Antenimieram-pirenena ankehitriny ny GJMP « Groupement des jeunes Malgaches Patriotiques” tarihako, hoy ny depiote Randrianasolo Jean Nicolas.
Kandidan’ny TIM eny Antehiroka Vonon-kandresy Rajaonera Samy sy ny ekipany
Kandida ben’ny tanàna eny amin’ny kaominina Antehiroka amin’ny anaran’ny antoko TIM Atoa Rajaonera Samy Andrianavalomalala. Tafapetraka teny amin'ny OVEC ny alarobia 11 septambra teo ny taratasy filatsahan-kofidiana miaraka amin’ireo lisitry ny mpanolotsaina TIM miara-dia aminy.
“Haja boum” Vonona hampandroso an’Ambohimangakely
Nitohy tamin’ny alalan’ny fanaovana didimpoitra maimaimpoana, ny fanaovana asa sosialy efa fanaon’ny antoko Tiako I Madagasikara, eny Ambohimangakely hatramin’izay.
Antananarivo Renivohitra Kandida tsy nampoizina ny an’ny TIM sy IRD
Niova endrika tanteraka ny tontolo politika ho amin’ny fitantanana an’Antananarivo Renivohitra. Olona tsy mbola re firy tamin’ny politika no natolotry ny antoko 2 sokajiana ho goavana ho kandida ben’ny tanàna dia i Tahiry Ny Rina Randriamasinoro
Fifidianana Kaominina 560 tsy misy kandida ben’ny tanàna
Kaominina 560 amin’ny 1695 manerana an’i Madagasikara no tsy misy kandida, kaominina 1369 nahitana lisitra kandida mpanolotsaina fotsiny; ny any ambanivohitra no tena tsy narisika ireo kandida.
Nahitana ny kandidan’ny Tiako i Madagasikara (TIM) sy ny tsy miankina. Nihazo ny Live Hotel Andavamamba nanatanteraka valan-dresaka lehibe izy ireo avy eo, ka tao anatin’izany no nampahafahantarana ny fisian’ny “Collectifs des candidats”, mamondron-kery manohitra izay hosoka sy tsy fanarahan-dalàna izay nisy. Toerana maro no nahitana izany, toy ny tany Toamasina, Ambalavao Tsienimparihy, Mahajanga I, Analalava, Farafangana,… Navoaka ny ampahany amin’ny porofo, dia ny horonantsary maneho ny mpiasam-panjakana, toy ny lehiben’ny CISCO manohana sy mampandany kandidam-panjakana dia ny IRD. Teo ihany koa ny propagandy an-kolaka tamin’ny kabary nataon’ny filoha, toy ny tany Vohilengo, Soanierana Ivongo nampifidy ny kandidany satria ireo no afaka miara-miasa aminy ka tokony hofidiana,… Nitondra ny heviny ihany koa ny teo anivon’ny Firaisamonim-pirenena tamin’ny alalan-dRamiarondrabehajason avy amin’ny FMTF, ka isan’ny nasiany resaka ny momba kara-pifidianana, fampiasana ny anaran’ny filoham-pirenena,… Nitondra soso-kevitra samihafa, toy ny fikirakirana ny bileta tokana miainga amin’ny fanontana, fanamarinana izany na ny nampiasaina na tsia,… Ny HCC no tompon’ny teny farany ka ho hita eo ny tohiny.